သက်ဝေ: ကိုယ်အလေးချိန်ကျလိုသူများအတွက် ထိရောက်သော နည်းလမ်း (သို့) Dukan Diet
ကိုယ်အလေးချိန်ကျလိုသူများအတွက် ထိရောက်သော နည်းလမ်း (သို့) Dukan Diet
အခုအချိန်မှာ လူအများစုရဲ့ နေထိုင်မှုစနစ်တွေ ပြောင်းလဲလာတာဟာ ခန္ဒာကိုယ် အလေးချိန် တိုးလာစေခြင်းရဲ့ လမ်းစ ဖြစ်နေပါတယ်။ အချိန်အတော်များများမှာ ကွန်ပျူတာကို မျက်နှာအပ်ရင်း စားပွဲနဲ့ ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီး အလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ အဲဒီလို ထိုင်နေရတဲ့ အချိန်တွေများလာတာနဲ့အမျှ ဗိုက်နဲ့ ခါးပတ်လည်မှာ မလိုလားအပ်တဲ့ အဆီပိုတွေ စုစည်းလာတတ်တာ လူတိုင်း သတိထားမိမှာပါ။ အဲဒါတွေအပြင် အလုပ်လုပ်နေရင်း စားပွဲပေါ်မှာ အသင့်ရှိနေတဲ့ အာလူးကြော်တို့ ချောကလက်တို့ အစရှိတဲ့ တိုတိုထွာထွာတွေကို ထိုင်ရာက မထတမ်း လက်လှမ်းပြီး စားနေမိတာလည်း ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာခြင်းကို ကောင်းကောင်းကြီး အထောက်အကူ ပြုနေပါတယ်။
အဲဒီလို ကိုယ်အလေးချိန်တိုးလာလို့ စိတ်ညစ် စိတ်ပျက်နေတဲ့ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကို ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ဖို့ နည်းလမ်းလေးနဲ့ တခု မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ အခုတလောမှာ နာမည်ကြီးလာတဲ့ Dukan Diet ပါ။ ပြင်သစ်နိုင်ငံက ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့ Dr. Pierre Dukan ဆိုသူက ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက် Dukan Diet ရယ်လို့ အမည်တွင်ပါတယ်။
အခု ပြောပြမယ့် နည်းလမ်းရဲ့ အဓိက အချက်ကတော့ ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်စားနေကျ အစားအစာတွေကို ပုံစံပြောင်းပေးလိုက်တာပါပဲ…။ အဲဒီ နည်းမှာ Phase 1 to4ဆိုပြီး အဆင့် လေးဆင့် ရှိပါတယ်…။ အဲဒါတွေကတော့…
Phase4– Permanent Stabilization တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Dukan Diet က သူများတွေနဲ့ မတူ တမူထူးခြားပါတယ်။ အကြမ်းအားဖြင့် ပြောပြရရင်…
ပထမဆုံး အဆင့်မှာ ပရိုတိန်း (အသားဓါတ်) ပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ကြိုက်သလောက် စားလို့ရပါတယ်…။ ပြောရရင်တော့ (EAT AS MUCH AS YOU LIKE) လို့ ဆိုကြတယ်။ အဲဒီလို စားရင်းကနေ ငါးရက်မှာ ကိုယ်အလေးချိန် နှစ်ကီလိုကနေ သုံးကီလို အထိ ကျနိုင်ပါတယ်။ Pure Protein လို့ ပြောတဲ့အတိုင်း ပရိုတိန်း သက်သက်ပဲ စားရမှာနော်…။ အဲဒီလို စားရမယ့်အပြင် တနေ့ကို နာရီဝက်လောက် လမ်းလျှောက်နိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြီးတော့ တနေ့ကို အနည်းဆုံး ရေ တစ်လီတာခွဲ သောက်ဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ နှစ်ရက်ကနေ ဆယ်ရက်အထိ စားလို့ရပါတယ်။
ပရိုတိန်းပါတဲ့ အစားအစာ ၇၂ မျိုးရှိတဲ့အနက် ကျွန်မတို့အတွက် နေ့စဉ် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ ချက်ပြုတ် စားသောက်နိုင်တာတွေကို အကြမ်းအားဖြင့် ပြောပြရရင် ကြက်သား၊ အမဲသား၊ ငါးအမျိုးမျိုး၊ ကြက်ဥ (အကာကို ကြိုက်သလောက် စားနိုင်ပြီး အနှစ်က တပတ်ကို သုံးလုံး ထက် မပိုရ)၊ အဆီထုတ်ထားတဲ့ နို့၊ ကော့တိတ်ခ်ျ ချိစ် နဲ့ အဆီမပါတဲ့ (Non-Fat) ဒိန်ချဉ်တို့ ဖြစ်ကြပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ အဆီဓါတ်ပါဝင်မှု မြင့်မားတဲ့ ၀က်သား၊ သိုးသား၊ ဘဲသား တွေအပြင် ပဲမျိုးစုံကို လုံးဝ စားလို့မရပါဘူး။ အသား ငါးတွေကို ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ဂျင်း၊ စပါးလင် အပါအ၀င် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင် အမျိုးမျိုးကို သုံးစွဲပြီး အရသာကောင်းအောင် ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ဖြစ်နိုင်ရင် ကင်စားတာမျိုး ဆီလေး ပါတယ်ဆိုရုံနဲ့ ကင်တာမျိုး (Grill / Roast) ကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။ အဲ့ဒါတွေနဲ့ အတူ တနေ့ကို Oat Bran တဇွန်းခွဲ (စားပွဲတင်ဇွန်း) ကိုလည်း အတူ တွဲစားသင့်ပါတယ်။
ဒုတိယအဆင့်မှာကတော့ ပထမအဆင့်မှာ စားလို့ရတဲ့ ပရိုတိန်း (Protein) အားလုံးကို ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေနဲ့ တွဲစားလို့ရပါပြီ။ စားဖို့ ခွင့်ပြုတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေထဲမှာ ကျွန်မတို့နဲ့ နီးစပ်တာတွေကို ပြောပြရရင် ခရမ်းသီး၊ ကညွတ်၊ ဂေါ်ဖီထုပ်၊ ပန်းပွင့်၊ ဘရိုကိုလီ၊ သခွားသီး၊ ဖရုံသီး၊ ဆလတ်ရွက် အပါအ၀င် အရွက်စိမ်းမျိုးစုံ၊ ဟင်းနုနွယ်နဲ့ မုန်လာဥ အဖြူ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။ မုန်လာဥ အနီစားလို့ရပေမယ့် နေ့တိုင်း မစားသင့်သေးပါဘူး။ နောက်တခုက စားလို့ရတဲ့အထဲမှာ အာလူး လုံးဝ မပါပါဘူး။ ဒါကြောင့် အာလူးကို ရှောင်ပါ။ ဒီအချိန်မှာတော့ သုံးရက်ကို ကီလိုဝက် (တပေါင်) လောက် ကျနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို မရောက်မချင်း အဆင့် တစ်နဲ့ အဆင့် နှစ်ကို သုံးရက် (သို့) ငါးရက်… တလှည့်စီ စားရပါမယ်။
အဆင့် တစ်နဲ့ အဆင့် နှစ်ကို တလှည့်စီ စားပြီးလို့ ကျွန်မတို့ လိုချင်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရောက်သွားပြီ ဆိုပါတော့… ။ အဲဒီအချိန်မှာ တတိယအဆင့် အနေနဲ့ အစားအစာတွေကို ပုံမှန် (Normal Diet) ပြန်စားလို့ရပါပြီ။ ဆင်ဆင်ခြင်ခြင်တော့ စားရမှာပေါ့နော်…။ ဒီ အဆင့်မှာ ငှက်ပျောသီးနဲ့ ချယ်ရီသီးကလွဲရင် ကျန်တဲ့ အသီးတွေကို စားလို့ရပါပြီ။ လွယ်လွယ်ပြောရရင် ပန်းသီး၊ သစ်တော်သီး၊ လိမ်မော်သီး… စသည်ဖြင့် တရက်ကို တလုံး စားနိုင်ပါပြီ။ နောက်ပြီး ထမင်းအဖြူ နဲ့ အာလူး ကို တပတ်မှာ နှစ်ကြိမ် စားနိုင်ပါပြီ။ ပဲ လည်း အနည်းငယ် စားနိုင်ပါပြီ။
ဒါ့အပြင် တပတ်ကို နှစ်ကြိမ် Celebration Meal စားလို့ရပါတယ်…။ ဆိုလိုတာက ပီဇာတို့ အာလူးချောင်းကြော်တို့ ရေခဲမုန့်တို့… အဲဒီလို ကိုယ်ကြိုက်တာတွေကို တပတ် နှစ်ကြိမ် စားလို့ရပါတယ်။ ၀ိုင်သောက်ချင်ရင်လည်း တဖန်ခွက် သောက်လို့ရပါတယ်။
ဒီအဆင့်မှာတော့ လက်ရှိ ကိုယ်အလေးချိန်ထက် ထပ်မကျနိုင်တော့ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တက်မလာအောင် ထိန်းထားပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ နေရ စားရမလဲ ဆိုတာကတော့ ကိုယ် ကျသွားတဲ့ အလေးချိန်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ - အရင်အဆင့်နှစ်ခုမှာ ကိုယ်အလေးချိန် ဆယ်ပေါင် ကျခဲ့တယ်ဆိုရင် တပေါင်ကို ငါးရက် နှုန်းနဲ့ ရက်ပေါင်း ၅၀ ဒီအဆင့်မှာ နေလို့ရပါတယ်။
အဲဒီရက်တွေမှာ တနေ့ကို အနည်းဆုံး နာရီဝက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်၊ တပတ်ကို တရက် ပထမ အဆင့်က အတိုင်း ပရိုတိန်း သက်သက် (Pure Protein) စား၊ နောက်တရက်မှာ ဒုတိယအဆင့် အတိုင်း ပရိုတိန်းနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် တွဲစားရင်း ထိန်းထားနိုင်ရင် ပိုကောင်းတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ အစဉ်အလာ မပျက်လေးပေါ့…။
ဒီအဆင့်ဟာ ၀ိတ်ချသူတွေ အတွက် အခက်ဆုံး အဆင့်လို့ ဆိုကြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ နံပါတ် တစ် အချက်က စားရတဲ့ ရက် ရှည်လို့ပါ။ နံပါတ် နှစ် အချက်ကတော့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ရောက်နေပြီဖြစ်တာကြောင့် စိတ်ရော ကိုယ်ပါ ပေါ့ပါ့ရွှင်လန်းပြီး စည်းကမ်းကို အချိန်မရွေး ဖေါက်ပြီး စားချင်တာ စားမိနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဒီအဆင့်ကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လက်ရှိ (ကျနေပြီးသား) ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားဖို့ပါ။ အများစုက အခုလို Diet ကနေ ရပ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်တွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီး တိုးလာတတ်တာမို့ အဲဒီအဖြစ်မျိုးကို မရောက်အောင် ထိန်းထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာလည်း တနေ့ကို Oat Bran နှစ်ဇွန်းစား၊ တနေ့ကို နာရီဝက် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားလုပ်၊ တပတ်ကို တခါ ပထမအဆင့်မှာလို ပရိုတိန်း သက်သက် စားရင်း မိမိလက်ရှိ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ဆက်လက် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပါပဲ။
ဒီ နည်းစနစ် ရဲ့ အဓိက သော့ချက်ကတော့ အချိုဓါတ်၊ အဆီဓါတ်နဲ့ ကာဘိုဟိုက်ဒြိတ်တွေ စားတာကို သေသေချာချာ လျှော့ချလိုက်တာပါ..။ သို့သော်လည်း ဒီ နည်းဟာ လေ့ကျင့်ခန်း အပြင်းအထန်လုပ်ရတဲ့ ဝိတ်လျှော့နည်းတွေ၊ အစားတွေ လျှော့စားရတဲ့ နည်းတွေ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပဲ များများစားရတဲ့ နည်းတွေထက် အများကြီး ထိရောက်တာကို တွေ့ရပါတယ်။ အသားတွေ ငါးတွေ ကြိုက်သလောက်စားရုံနဲ့ ဒီလောက် မြန်မြန်ကြီး ဝိတ်ကျတယ်ဆိုတာ စိတ်ထဲ အတော်လေး မယုံနိုင်စရာကောင်းတဲ့ အချက်ပါ။ ဒါပေမယ့် အဲဒါ တကယ် ဟုတ်ပါတယ်။
သို့သော်လည်း အရာရာတိုင်းမှာ ကောင်းကျိုးနဲ့ ဆိုးကျိုးဟာ ဒွန်တွဲနေတတ်တယ် မဟုတ်လား…။ Dukan Diet ကို လိုက်နာကြတဲ့သူတွေရဲ့ သုံးသပ်ချက်တွေမှာ ပြောလေ့ရှိကြတဲ့ ကောင်းကျိုးတွေကတော့ ပထမရက်ပိုင်း အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲ ကိုယ်အလေးချိန် သိသိသာသာ ကျဆင်းသွားတာကို မျက်ဝါးထင်ထင် တွေ့ကြရတာရယ်၊ စားခါနီးတိုင်း ကိုယ် စားမယ့် အစားအစာကို ကယ်လိုရီ တွက်နေစရာမလိုတာရယ်… ကျန်းမာရေးအတွက် ထိခိုက်စရာ ဘာမှ မရှိတာရယ် လို့ ဖတ်ရပါတယ်။
ဆိုးကျိုးအနေနဲ့ကတော့ နေ့စဉ် အသား ကြက်ဥ စတဲ့ ပရိုတိန်းတွေပဲ စားရတဲ့အခါ ကိုလက်စထရော တက်လာနိုင်တယ်လို့ ဆိုကြတယ်။ နောက်တခုက ဖိုင်ဘာ စားတာ နည်းသွားတယ်… ဒါကြောင့် Oat Bran နေ့တိုင်းစားပြီး ရေ တလီတာခွဲကနေ နှစ်လီတာ သောက်ပြီး ပြန်ဖြည့်ရတယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မိမိတို့ရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန် ကျချင်ကြတဲ့သူတွေတွက်တော့ ဒီနည်းလမ်းဟာ အတော်လေး အထောက်အကူပြုတာ တွေ့ရပါတယ်။ ဒီ့ထက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံကို သိချင်ရင် ဂူဂယ်လ် မှာ Dukan ဆိုပြီး ရိုက်လိုက်တာနဲ့ သူနဲ့ ပတ်သက်သမျှတွေ အများကြီး တွေ့ကြ ဖတ်ကြရမှာပါ။ တကယ်လည်း စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်... ဖတ်ကြည့်ကြပါ…။ ကိုယ်အလေးချိန် ကျချင်သူများ ဒီ Dukan Diet နည်းကို စမ်းသပ်ပြီး စားကြည့်ကြပါလို့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
- 2013 January - Look Magazine တွင် ဖေါ်ပြပြီး -
Posted by သက်ဝေ at 11:20 AM
မိုးငွေ့........ January 28, 2013 at 2:23 PM
အတော်ပဲ ၀ိတ်ချချင်နေတဲ့ ညီမတစ်ယောက်ကိုပြောလိုက်ဦးမယ်...။
Ma Tint January 28, 2013 at 3:59 PM
၀ိတ်ကျဘို့ ထိရောက်တဲ့နည်းလေးမို့ အသေအချာကို မှတ်သားထားမယ် မသက်ရေ။ အခုအသက်ကြီးလာတော့ ၀ိတ်က တစ်နေ့တစ်ခြား တက်လာလို့း)ကျေးဇူးနော်။
Hmoo January 28, 2013 at 7:07 PM
seesein January 30, 2013 at 3:51 PM
ဒေါ်သက် ၀ိတ်ကျချင်လို့ ၀ံဂျီးစကားနားထောင်တော့မယ်...ပြင်သစ်နည်းတွေဘာတွေ မသုံးတော့ပါဘူး ...ဗမာနည်းပဲသုံးတော့မယ်...း)
for you? I wouldn't mind publishingapost or elaborating onafew of the subjects you write regarding here. Again, awesome web log!
Visit my blog ... Order Natural Cleanse
မြသွေးနီ November 11, 2013 at 10:47 AM
၀ိတ်ကျလို့ လှတပတလေးဖြစ်သွားရင် တို့အစ်မကို ပြုစုမယ်... အခုတော့ ၀တ၀တလေးပေါ့... :)